Wepamusoro 10 Turkey Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(233 mavhoti, avhareji: 4.98 kubva 5)
Loading ... Zvepamutemo Turkish online macasino kasipo mukati merudzi rweTurkey, kunyangwe vanobhejera vanotsigira tariro kune rimwe zuva vachiona yakazara runyorwa rwekubhejera sarudzo dzevanhu vanobva kuFederal Republic yeTurkey. Nekuda kwemagadzirirwo ayo emubatanidzwa, Turkey yakafanana neUnited States munzira iyo mitemo isiri yunifomu kune iyo nyika-kunyangwe nekutenda Turkey yakawanda kwazvo yezvimedu seUS.
Turkey rinoumbwa 16 Federal inoti, iyo zvino yava miviri pamutemo dzakasiyana stances kurutivi paIndaneti nokubheja.
List kuti Top 10 Turkish Online Casino Sites
Turkish Online Gambling Mitemo
Paramende yeSchleswig-Holstein yakapfuura Gaming Reform Act (GRA) munaSeptember ye2011, iyo inobvumira kambani dzekambani uye makamuri epa poker (uye zvichida mabhuku emasikirwo) kuisa chireisheni chekushandisa mitambo yematambudziko paIndaneti munyika yavo, chero bedzi vachibhadhara mari ye20% yemari yakawandisa yekodzero iyoyo. Panguva iyi, imwe 15 Turkish Lander (nyika) munaOctober 2011 yakapfuura Mutestant Treaty pakubhejera (IGT), iyo yakabvumira mabhuku emitambo ye20 kuwana mabhizimisi, asi haana kubvumira kakinasi kana makamuri ekamba. Muchiitiko ichi, mari yacho yaizova 5% yemutengo. Izvi zvinogadzira mamiriro ezvinhu apo Turkish Lander inenge ichida kuputsa mutemo weEU, iyo inosimbisa mitemo yemunharaunda haikwanise kuvhara mitemo yakasiyana inoshanda kune imwe nzvimbo chikamu chenyika yavo. I European Union Commission inofunganya nezvakaitika.
Mitemo yekubhejera yeTurkey yakagara yakaomarara, kutaura zvishoma, nekuti vanobhejera vakabvumidzwa kusaina kumakamuri epaketi epamhepo nemakasino epamhepo, asi maitiro acho pachawo haasi pamutemo. Naizvozvo, apo mugari weTurkey Pius Heinz akahwina iyo 2011 World Series yePoker Main Chiitiko uye ndokuzove mukurumbira weTurkey, akapembererwa nekuda kwezviitiko zvaive zvisiri pamutemo mukati me Deutschland. Achisimbisa ichi dichotomy, iye 22-gore rekare shasha yepoker akataura kuti anokudza hunyanzvi hwake sevatambi vepamhepo poker.
Ehe, Pius Heinz aisatamba pane chero dzimba dze poker dzaive dzakavakirwa pavhu reTurkey. Izvi zvinogona kutaurwa pamakasino epamhepo nemabhuku emitambo uko maTurkey anoisa kubheja mazuva ano. Ese aya masayiti ndeekunze mune zvakasikwa, kazhinji iwo mawebhusaiti kubva kuUnited Kingdom. Zvichida pamwe ne2011 Turkish online kubhejera mitemo kwakagadzwa, tinofambisa nhanho imwe padhuze nezuva iro veTurkey chairo kasino vanobhejera vachakwanisa kutamba kunzvimbo dzekuzvarwa. Kana zvisiri, pamwe ivo vanozogona kutamba zviri pamutemo kunzvimbo dzepamutemo dzakapihwa marezenisi epasi rese.
Nokudaro, pamusana pemafuraji epafurasi yemutambo zviri nani kubva kuTurkey, zvaunoda ndezvipi zvipi zvinopa Turkey e-wallets kana kubhadhara kushandiswa kwemashumiro, Euro semari yekusarudza, uye Turkey semutauro unotsigirwa. Nenguva isipi, mazita akawanda eEurope mawebhusayithi anopa zvido zvevatambi veTurkey kwose kwose.
Sofortuberweisung Online dzokubhejera
Kana iwe uchida kushandisa iyo Sofort Payment Network kana "Sofortuberweisung" web chikwama sevhisi kunze kweGauting, Turkey, unofanirwa kushandisa macasino anotevera: 888 Casino, William Hill Casino, Betway Mobile Casino, 21Nova, Eurogrand kana All Slots Casino. Sofort's ewallet sevhisi inobhadhara anopfuura mazana mana akasiyana mawebhusaiti zvivakwa, asi izvi ndizvo zvisarudzo zvepamusoro panguva ino. Giropay ndeimwe basa rekubhadhara maTurkey ane akaundi yebhangi, saka funga nezveGiropay kasino kana yave nguva yekuwana Deutsch online kasino.
Imwe webhu wallet service yevashandi veTurkey-vatauri vanobva kuAustria kufunga nezveKonto. Panguva yeKonto iri kubva kuCzech Republic, processor yekubhadhara ndiRaiffeisen International Bank-Holding AG kunze kweVienna, Austria. RBI inofambisa kubhadhara kweKonto apo vanhu vanoita deposits ku888Casino, William Hill Casino, Betway, Expekt Casino, Kasino, AllSlots Casino, uye Winner Casino. Muchokwadi, e-Konto inogona kushandiswa 96 dzakasiyana online kubhejera nzvimbo, ichipa vanobhejera yakawanda yekutamba sarudzo.
Click2Pay Turkish How ndokuchiisa kune Deutsch Casino Online
MaTurkey anoda kushandisa iyo yeMunich-yakavakirwa CLICK2Pay online yekubhadhara system ine 888 nzvimbo dzakasiyana dzekusarudza kubva. Chiverengero chakakosha cheizvi chichava dzimba dzebingo chaidzo, mabhuku emitambo, uye makamuri epoker (senge Party Poker uye Pokerstars), asi anopfuura chetatu acho ari online macasino. Kamwe zvakare, Click2Pay GmbH ndiyo inogamuchirwa fomu yekubhadhara paWilliam Hill Casino, Spin Palace Casino, Roxy Palace, Betway Mobile Casino, 32Red Online Casino, uye Dream Vegas. Vabhejeri veTurkey vangangodaro vari kutanga kuona iyo pateni inogadzira nemhando dzakasiyana dzemazita emakasino- ivo vanowanzo kuve nesarudzo zhinji dzekubhadhara. Zvakadaro, kana iwe ukafunga kuti haudi kushandisa iyo William Hills uye bet365's yekasino tafura yemitambo yenyika, Click2Pay inokupa yakawanda yakawanda dzimwe sarudzo.
ClickandBuy ndeimwe inozivikanwa yemagetsi yekubhadhara uye yekubhadharisa system iyo yandinombopokana neClick2Pay mupfungwa dzangu, asi Dzvanya & Tenga zvirokwazvo inhengo yayo yemari. ClickandBuy yakavambwa naNorbert Stangl mu1999 payakanga ichiri kuzivikanwa seFirstGATE Internet AG. Bhizinesi iri raive muCologne, Turkey parakatanga muzhizha ra2000, asi rakabva raendesa dzimbahwe kunzvimbo dzakachengetedzeka (zviri pamutemo) dzeLondon, England. Mitemo yekubhejera yeTurkey yakaita muridzi weClickandBuy kutya zvakakwana kuti abude kunze kwenyika, asi vazhinji vanobhejera veTurkey vachiri kunakidzwa nekushandisa iyi inozivikanwa uye yakapararira sevhisi. ClickandBuy inoshandiswa nevatengesi vanopfuura zviuru mazana manomwe pasirese, kusanganisira mazana manomwe nenomwe ekubhejera masayiti epamhepo, uye mazana masere makumi matanhatu neshanu emitambo yemitambo inotsigira Chirungu semutauro. Aya masosi anosanganisira Royal Vegas Online Casino, Ladbrokes, World Series yePoker Casino, PKR Casino, Dream Vegas, Planet Win 7,000, Titanbet, 773red Online Casino, Roxy Palace, uye (zvechokwadi) William Hill uye 683casino.
NETeller uye Moneybookers
Vatambi vazhinji veTurkey vanoshandisawo Neteller neMoneybookers, ayo ave iwo maviri aripo epasi rese emagetsi chikwama masevhisi. Neteller anoenderera nekugadzirisa kubhadharisa nyika zhinji kusara kweUnited States, nepo Moneybookers ichiita senge ichikura gore rega rega. Pano mugore kana maviri anotevera, ungangotanga kunzwa zvakawanda nezve "Skrill", rinova zita rechiratidzo reMoneybookers. Pane imwe nguva, Skrill rinenge riri iro zita rekusarudzika reMoneybookers, pamwe kana mutambo wepamhepo uchigadziriswa zvakanyanya kuburikidza nekamwe-tap touchscreens pane imwechete-tinya mbeva.
Turkish online vanobhejera vanofanirwa kurangarira kuti kwavo kuvaraidza (nehunyanzvi) zvisiri pamutemo panguva ino, saka vanofanirwa kungwarira pavanosarudza yavo online kasino. Kunyangwe iwe usingatye kutya kupinda mudambudziko nekuda kwezviito zvako, dzimwe njodzi dzinozviratidza. Paunobata nemusika mutema, haumbofi wakawana nzira yekuenda kuzviremera zvakakodzera kana dambudziko ramuka. Nechikonzero ichocho, ini ndinokurudzira kuti usarudze chete makasino ane mukurumbira paInternet - iwo anozivikanwa nemunhu wese. William Hill, bet365, uye Ladbrokes nguva dzose zvakanaka uye dzimwe dzadzo dzinopa vatambi veTurkey nekupa chiTurkey senzira yemutauro, iyo Euro senge yemari sarudzo, uye yakawanda nzira dzekubhadhara dzakabatana dzeTurkey.
Pakupedzisira, nyika dzakasiyana dzeTurkey uye European Union Commission ichauya kuzotenderana nekugadzirisa mamiriro epamutemo ekubhejera online muTurkey. Zvinonzwisisika nyika dzeTurkey dzinogona kutora iyo Schleswig-Holstein modhi yekunyoresa zviri pamutemo makasino epamhepo, asi izvo zvasara kune zvichaitika mune ramangwana. Kusvikira panguva iyoyo, haugone kutamba kumaTurkey online makasino akagashirwa pavhu rako rekuzvarwa, asi uchave uine zvakawanda sarudzo yemutambo wekushandisa uchishandisa epasirese kasino zvivakwa zvinoenderana nezvinodiwa zvemitambo yako. Paunoita, tinotarisira kuti ruzivo rwuri pamusoro rwunofanira kukubatsira kunhonga kasino chaiyo yekuisa kubhejera kwako.
0.1 List kuti Top 10 Turkish Online Casino Sites
2.1 Turkish Online Gambling Mitemo
2.3 Sofortuberweisung Online dzokubhejera
2.5 Click2Pay Turkish How ndokuchiisa kune Deutsch Casino Online
2.7 NETeller uye Moneybookers